राप्रपाले सातै तहमा उम्मेद्वार घोषणा
Published On: 2017-06-06 In Category: जिल्ला समाचार
धनकुटा जेठ २३ ।
आगामी असार १४ गते हुनगैरहेको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धनकुटाले उम्मेद्वारहरुको नाम घोषणा गरेको छ । स्थानीय प्याशिफिक होटलमा आयोजित उम्मेद्वार घोषणा कार्यक्रमको आयोजना गरी नाम घोषणा गरेको हो ।
जिल्लाको ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका उम्मेद्वारहरुको नाम घोषणा गरेको हो । सो अवसरमा पार्टीले महालक्ष्मी नगरपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेको जानकारी दिए । तर, कांग्रेसका जिल्ला सदस्य निर्मल ओझा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
यसबाहेक सबै तहका प्रमुख तथा वडाहरुमा एक्लै चुनाव लड्ने राप्रपाले जानकारी दिएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकामा राप्रपाले उपमेयर पद लिएर मेयरमा भने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति अग्नी पौडेललाई मेयर पदमा सहयोग गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिए । यहाँ उपमेयरमा निर्माण ब्यबसायी महेन्द्र निरौलालाई उम्मेद्वार बनाएको जानकारी दिए । त्यस्तै छथर जोरपाटीमा अध्यक्षमा माधव भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाएको राप्रपाले उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
यस्तै धनकुटा नगरपालिमा जिल्ला उपाध्यक्ष बालनन्द भुर्तेललाई मेयर र उपमेयरमा ताराकुमारी तामाङलाई उम्मेद्वार बनाएको जानकारी दिए । यस्तै पाख्रीबास नगरपालिकाको मेयरमा श्याम गुरुङ र उपमेयरमा पवित्र श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।
यस्तै गाउँपालिकातर्फ चौविसे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गजेन्द्र बस्नेत र उपाध्यक्षमा चन्द्र बुढाथोकीलाई उम्मेद्वार छन् । त्यस्तै साँगुरीगढी गाउँपालिकामा धर्मध्वज राईलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाम टुंगो लगाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै खाल्सा छिन्ताङ शहीदभूमी गाउँपालिकामा अध्यक्षमा गुर्जमान राई उपाध्यक्ष अनिता राईलाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।
२०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ३५ गाविसमध्ये एउटा महाभारत मात्र राप्रपाले विजय हासिल गरेका थिए । तर, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र नं. २ मा पूर्वप्रम सूर्यबहादुर थापाका पुत्र सुनिलबहादुर थापा विजयी भएका थिए ।
पूर्वसांसद तथा नेता पदमबहादुर बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष कुमारबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न घोषणा कार्यक्रममा थापाले स्व. सूर्यबहादुर थापाको कर्मभूमि रहेकोले स्थानीय तह विजयी नै स्व. थापाप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताए । उनले गुटमा विभाजन नभई एकजुट भएर निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमको सञ्चालन चेतनाथ चापागाईले गरेका थिए । सो अवसरमा धनकुटा नगरका मेयरका उम्मेद्वार बालानन्द भूर्तेललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।